Allgedo.com » 2013 » February » 12
Home » Archive Daily February 12th, 2013
Faah Faahin dheeraad ah oo ka soo baxaya Qarax ka dhacay Magaalada Balaweyne
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha uu sababay qarax loo adeegsaday Bam kuwa gacanta laga tuuro ah oo lagu weeraray goob maqaaxi ah oo ku taala agagaarka suuqa xoola xaafadda Howl-wadaag ee magaalada Baladweyne Sida Warbaahinta uu u xaqiijiyay Gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga Gobolka Hiiraan Axmad Cismaan Inji qaraxa ayaa ka dhacay xaafada howl Wadaag. Bamka ayaa lagu tuuray goob maqaaxi...
Ahlu Suna oo Amaro Dul dhigtey Xildhibaano ka Tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo Galgaduud Booqasho ku jooga
Masuuliyiinta Ururka Ahlusuna ayaa amar dhul dhigay xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkaan dambe socdaalo ku maraye deegaano ka tirsan Gobalka Galgaduud. Kadib shirjaraa’id uu maanta ku qabtay Magaalada Guriceel ee Gobalka Galgaduud Gudoomiyaha Golaha fulinta ee ururka Ahlusuna Sheekh Maxamed Xeefoow ayaa wuxuu sheegay in Xildhibaanada ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ay...
Askari ka Tirsan Ciidamada Kenya oo Goor dhaweyd lagu Diley Magaalada Mandhera
Wararka ka imaanaya Magaalada Mandheere ee Gobalka NFD ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubaysan ay toogteen askari ka tirsan ciidanka Kenya. Dilka askariga ayaa wuxuu ka dhacay meel ku dhaw xero milateri oo ay ciidanka Kenya ku leeyihiin Degmada Mandheera ee Gobalkaasi NFD. Dadka deegaanka qaarkood ayaa inoo sheegay in dilka askariga ay ka dambeeyeen kooxo hubaysan kuwaasi oo ka qaatay qoriga uu watay...
Baarlamaanada Soomaaliya iyo Burundi oo iska kaashanay arimo dhowr ah.
Iyadoo maalmahan Magaalada Muqisho ay ku sugan yihiin Xildhibaano ka socdo Baarlamaanka dalka Burundi kulamana ay la qaateen madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya ayaa Guddoonka Baarlamaanka wuxuu sheegay in Baarlamaanada Soomaaliya iyo Burundi arimo kala duwan ay iska kaashan doonaan. Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka hadlayey kulan uu la qaatay Xildhibaanada...
Ciidamada Dowlada oo Boqlaal Qof ka qab qabtey Xaafadaha Magaalada Muqdisho.
Saraaakiisha ciidamada dowlada Somalia ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal balaaran oo xalay saqdii ay ka sameeyeen degmooyinka magaalada Muqdisho qaarkood, kuwaasoo ay sheegeen in lagu sugayey amaanka. Howlgalkan oo ahaa mid guri guri loo galayey xaafadihii la baaray ayaa saameyn ku yeeshay degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood oo ay ku jiraan Xamar weyne iyo Xamar jajab. Taliyaha ciidamada Nabad sugida...
Saraakiisha Puntalnd oo sheegay in ay ku Raad joogaan Dadkii ka dambeeyey Weerarkii Is Qarxinta.
Saraakiisha dhanka ammaanka ee Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inay ku raadjoogaan cidii ka dambeysay weerarkii ismiidaaminta ee ka dhacay Magaalada Gaalkacyo. Jaamac Maxamed Axmed Sandaqad taliyaha qeybta Booliiska maamulka Puntland ayaa sheegay inay iminka hayaan raadad ku aadan cidii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday taliye ku xigeenka ciidanka Booliiska Puntland. Wuxuu sheegay Sandaqad inaysan...